Taariikhda My Butros » Waa maxay Haweenka Dhabtii Rabtaa?
by David Hooska
Last updated: Jul. 01 2020 | 5 min akhri
Haddii aad weydiiso qof dumar ah waxa uu doonayo, iyada jawaabi doonaa iyaga oo isku dayaya in lagu qeexo waxa uu doonayo in nin. Oo iyana waxay sida caadiga ah waxa uu leeyahay dhibaato ku tilmaamay in. Xitaa Iyadu waa inaanay bilaaban karo in lagu qeexo waxa ay tahay iyada dhab ahaantii u baahan yahay.
Marka aad si taxadar leh u dhawrtaan haweenka ee xiriirka, aad ogaato in xidhiidhka qaarkood ay aad uga qanacsan yahay oo guul ka badan kuwa kale. Waayo, xiriirka guul, haweeneyda waxaa loo qaadan wax walba oo ay u baahan tahay. In xidhiidhada in aan fulinta, mid ama ka badan baahida naagta aan lagu kulmay.
Waxay garanaaya markii wax muhiim ah uu maqan yahay
Marka aad si taxadar leh u dhawrtaan haweenka oo banaanka u soo baxay ee ay guurka, aad ogaatid in ay helitaanka wixii ay ka maqan in ay guurka. Tusaale ahaan, haddii jinsi ah waa caajis, ayay heli doontaa lover xiiso leh. Haddii galmo ee guurka waa la aqbali karo, laakiin waxay dareensan yahay in iyada oo aan lagu qaabilo si xushmad leh, ayay heli doontaa nin oo lagu daweeyo doono si xushmad leh. Marka dumarku ka baxsan ee ay guurka, ay raadinayso in ay leeyihiin mid ama ka badan baahidooda la kulmay. Haweenka qaarkood, haddii ay qaadato laba nin oo kala duwan si aad u hesho kulmay baahida oo dhan, iyadu qaban doonaa.
Arinta kaloo xiisaha leh, xaaladaha inta ugu badan, haweenka ee ma doonayaan in ay tagaan meel ka baxsan ee ay guurka. Waxa keliya oo ay garteen inay ku faraxsaneyn. Waxay noqday nugul horumaro ka rag kale oo ka dibna u doortay inuu raaco waxa la.
Dumar badan, haddii iyada la qancinayo baahidaada oo dhan, iyada oo gebi ahaanba ka tagi doono ninka iyo raadiyo nin oo iyada soo bixi karaan. Laakiin iyadu way garan maayo in waxa la yeelay, iyadu ma qaadan dhan baahida iyada la kulmay, iyada oo keliya waa og yahay oo ku saabsan xidhiidhka ka iyadu ma Jeela.
Dumarka aan u ogaado, iyo wax badan oo ka mid ah Dhab ma waxa ay caddeynayaan karaan, laakiin haweenka u baahan tahay afar waxyaabood si in la fuliyo.
Waxaa jira afar waxyaalood oo muhiim ah Haweenay Baahida A
First, waxayna u baahan tahay inay dareemaan mahadnaqayo qofka u gaar ah oo ay tahay qof. Waxay u baahan tahay si ay u dareemaan gaar ah, Si ka duwan haweeney kasta oo kale. Oo iyana waxay u baahan tahay in la ogaado in iyada nin iyada taageertaa in dayada iyada.
Labaad, waxayna u baahan tahay si ay u dareemaan in qoto dheer saaxiib la xidhiidha shucuurta. Waxay u baahan tahay in ay Shukaansiga in dareenka iyada nin. Waa xiriir ah ayaa waxay la qayb sanaysaa kaliya isaga la.
Third, waxayna u baahan tahay si ay u dareemaan sida naag. Waxay u baahan tahay si ay u dareemaan qurux badan, sexy, iyo dhedig. Waxay u baahan tahay in waxyaalahan oo dhan in yimaado raaxaysan in la noqdo qof dumar ah.
Ugu dambayntiina, waxayna u baahan tahay galmo dareen kulul. Waxay u baahan tahay in la qalday, Qurxisay, caraysiiyo, iyo qanacsan, kaani oo kale mar. Waxay u baahan tahay in aad la kulanto waxyaabo cusub, siyaabo cusub, oo ay ka mid khayaali iyo doorarka. Waxay ka dhigaysa iyada dareemaan nool.
Qof dumar ah ayaa in badan Goortii iyadu waa nin in ay wax walba la, markay la jiraa nin waxay tahay inay tahay xan ah ku waalan yahay. Laakiin taasi dhacdo. Sida caadiga ah, mid ama ka badan oo wax ka maqan.
Tusaale Of Ragga kala duwan In Life Haweenay A ee
Bal aynu eegno ragga kala duwan in qof dumar ah oo uu la joogay in noloshiisa. Ragga kala duwan la kulmay qaar ka mid ah baahiyaha, laakiin dhammaantiin ma aha iyaga ka mid ah.
Tusaale ahaan, ha la qaado wiilka dhan caan classic xun. Wiil The xun siinayaa iyada galmo xiiso leh. Oo maadaama uu aad u rag ah, wuxuu ka dhigaa iyada dareemaan sexy. Laakiin waxa uu liishaan is a nuugo oo qiyaanoole on iyada. Ma ay dareemaan mahadnaqayo, oo iyana waxay u badan tahay in aanay awoodin in ay dareemaan in ay wax xiriir dareenka. Inta badan ay u noqdaan dad caadaysatay isaga maxaa yeelay jinsi waa si wanaagsan oo iyadu dareensan yahay si aad u galmada. Waxay isku dayi doonaa wax aan micne lahayn in ay ka adkaan, laakiin waa hoobiyay Camalkoodii. In weyni ka dareen, Waxay ugu dambayntii ka tago isaga wanaag. Ugu yaraan qof dumar is sare kalsoonida ugu danbeyn ka tago isaga wanaag.
Nice Guy The
Hadana waxaa jira nin u classic wimp fiican. Oo isagu wuxuu hoggaamiyaa iyada dareemaan fariida, iyo wixii uu awoodo in la dhiso xiriir dareen iyada. Nasiib darro, inkastoo, uu caajiso, ama uu ma LAB ah, si ay u dareemaan ma sexy oo ma dareemaan Jeedsaday oo ku saabsan galmada. Waxay jeclaan lahaa inaan guursado, sababtoo ah waxa uu noqon lahaa fiican ee qoyska ka mid ah, laakiin sabab qaar ka mid ah, waxay daahiyaan shaqaysiinta. Waa waayo, isagu ha iyada dareemayaa laga abuuray galmada.
The Guy Niyad ka maqan
The dhow ayeey heli laga yaabaa in ay xiriirka u fiican yahay nin ku dareen ahaan ka maqan. Waxa uu aha wimp ah, oo uu ahan liishaan ah. Waxa laga yaabaa inuu lab, iyo iyada siisaan galmo wanaagsan. Waxa laga yaabaa inuu mudane ah oo ay uga dareemaan aad u mahadnaqayo. Laakiin waxaa jira hal wax maqan oo muhiim ah. Waxa uu dareen ahaan la heli karo ma. Iyadu waxba ma dareensan dareen ahaan isaga ku xidhan. Tani waa laga yaabaa in ay haweenka ugu weyn cabasho leeyihiin. Waxay helay nin ku haboon oo isugu shabahay, laakiin waxaa kuu caddayn, inuusan ku dareen ahaan la heli karaa. Waxay isku dayo in ka badan iyo in ka badan si ay u helaan isaga in ay kor u furo iyada, laakiin marnaba dhacaya. Haweenka dhul dareenka, Oo iyana waxay u baahan tahay, si ay ugu danbeyn ka tago.
Waxaa jira nin oo kale in iyada nolosha. Waxaa jira saaxiibkeed gay. Waxay jecel yahay laallaada isaga la maxaa yeelay, wuxuu iyada dareemaan sexy iyo inuu dhab ahaan ka dhigaysa iyada dareemaan mahadnaqayo. Waxay leedahay badan ayaa ka dhexeeya isaga la, laakiin waxaa kuu caddayn, uu gay, oo sidaas aan ikhtiyaarka ah.
Jeclaa ayaa dahsoon
Hadana waxaa ka lover dahsoon marmar. Sababo badan ayay waligii ka fiirsado lahaa si dhab ah wax, laakiin maydhan biyaha, jinsi ah waa wanaagsan. Dhowr bilood kasta Marka, markii ay caajisaan leh sida ay wax u socdaan iyada, Oo waxay isagii ku soo wici doonaa ilaa iyo gudbo, waayo, mid wax, iyo hal wax oo kaliya. Wixii jinsi ah. Markaas ayay caleemo rajeynaya ayay ugu dhakhsaha badan ka heli doontaa nin ku haboon.
Ugu dambayntiina, sida hal tusaale ahaan la soo dhaafay, waxaa jira nin guursaday. Kaliya dumarka kalsooni hooseeyo u ogolaan isu noqdaan sayidad,, ama si kale loo dhigo, qof dumar ah oo raba wixii aan iyada ku yeelan karaan. Wuxuu siiyaa iyada galmo xiiso leh, wuxuu ka dhigaa iyada dareemaan sexy, ay wadaagaan xiriir dareenka qoto dheer. Laakiin waxa uu xaaskiisa oo kuguma dayn doonaan. Sidaas daraaddeed waxay la dareemi uusan gaarka ah. Iyo maxaa yeelay, iyadu waa kalsooni yaraan, waxaa aad u adag iyada u yahay inuu ka tago.
Laakiin bal aynu dib u helaan in ay dumarka kalsooni sare.
Haddii ay dhici karto inay qabaan oo dhan u baahan yahay
Sidaas, kuwa ahaayeen tusaalooyin ka mid ah ragga ee nolosheeda. Sida aad arki karto, mid ama ka badan baahida iyada oo aan lagu kulmay tusaale kasta. Laakiin qiyaasi haddii ay la kulmi karaan nin oo si fudud la kulmay dhamaan baahida iyada. Nin yeellay iyada dareenka mahadnaqayo. Nin farxda xiriir ah oo awood leh oo qoto dheer dareenka iyada la. Nin ka dhiga iyada dareemaan dhedig iyo Dhagartiinuna iyo sexy. Nin kan iyada galmo dareen kulul. Hadda oo uu noqon doono mid laga cabsado.
Taasi waa i jeclaa cajiib ah. Eebana waa xoog weli tur. Honest weli xeelad leh. LAB ah weli dareenka. Gaaray weli dabacsan. Goal u janjeedha weli lama filaan ah. Degani weli la siinayo. Xukuma weli fekeray. Oo waxaa iyada siinaayaan duurjoogta qaylo orgasms.
Waa nooc ka mid ah wax haweenka ku riyoonayaa.
Waxay ahayd diiradda aan cilmi u danbeysay ee ay 15 sano, iyo waxa lagu diiwaan on aan kitaabkayga, “David Hooska ee cajiib jeclaa Manual.” Waxa aad war dheeraad ah oo ku saabsan buug ka akhriyi kartaa on my website.
Sii haweenka ahaanshaha cajiib ah,
Maxaa Twitter Waxaad bari kartaa saabsan Love?